စုံတွဲများ ချစ်တင်းနှောကြသည့် ဗီဒီယိုများ ရန်ကုန်လူငယ်ထုကြားတွင် ပျံ့နှံ့ နေခြင်း (သတင်းဆောင်းပါး) | Freedom News Group
by FNG on June 16, 2009	၁၆ ဇွန် ရန်ကုန်၊ ၊ယူကွန်
Myanmar Mobile Phone Sex Video Widespread မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်တာနက်အသုံးပြုသူလူများကြားထဲတွင် Home Made ဆိုသော စကားတစ်ရပ်ရေပန်းစားလာ သည်မှာ မေလဆန်းပိုင်းကတည်းကဖြစ်သော် လည်း တစ်လခန့် အကြာတွင် ထိုဝေါဟာရ မှာ အင်တာနက် ကဖေးဆိုင် တို့ အား အသုံးပြုသူများပြားစေရန် ပိုမို ဆွဲဆောင်စေ နိုင်သော ဝေါ ဟာရ တစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Tags: စုံတွဲများ ချစ်တင်းနှောကြသည့် ဗီဒီယိုများ ရန်ကုန်လူငယ်ထုကြားတွင် ပျံ့�	From: သတင်း ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း	← တီဟီရန် စ်ိမ်းလန်းသော တော်လှန်ရေး၏ စတုတ္ထမြောက်နေ့(သတင်း ဓာတ်ပုံ)
အီရန် ဆန္ဒပြမှု ပိုမိုအားကောင်းလာ၊ရေနံစိမ်း ဈေးနှုန်းမြင့်တက် →
မကြည့်ဘဲနေကြပေါ့ဟယ်..။ ဘာအစိုးရတွေလာပြောနေတာတုန်း..။ ဒုက္ခပဲနော်..
August 24, 2009	မျိုးချစ်	#
“လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တွေ မှာ လူငယ်တွေ က အင်တာနက် ကနေ ပြည်တွင်းသတင်းတွေ ကို သိအောင် လုပ်ကြတယ် ၊ဒါကို အာရုံလွှဲ တဲ့ အနေ နဲ့ အစိုးရ က ကြံစည်တာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် လို့ရေးထားတာတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးဗျ။”
ဒါဆိုရင် ဘာလို့ အဲဒီဆိုဒ်တွေကို ဒီအစိုးရ ဘာလို့ မပိတ်သလဲ တွေးကြည့်ပါလား။ ရိုးရိုးလေးပါဗျာ။ ရှင်းပါတယ်။
August 20, 2009	poo	#
August 14, 2009	mr.smit	#
August 11, 2009	ဂျိုလီ	#
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေဆီကတဆင့် bluetooth ကနေရထားတာတွေတော့ အများကြီး ကြည့်ဖူးတယ်…
လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တွေ မှာ လူငယ်တွေ က အင်တာနက် ကနေ ပြည်တွင်းသတင်းတွေ ကို သိအောင် လုပ်ကြတယ် ၊ဒါကို အာရုံလွှဲ တဲ့ အနေ နဲ့ အစိုးရ က ကြံစည်တာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် လို့ရေးထားတာတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးဗျ။
ဒါပေမယ့်ကြည့်ရအောင် Link လေးဘာလေးတော့ချိတ်ပေးဦးမှပေါ့ဟ ကောင်တို့ရ။
June 18, 2009	ဂျစ်တူး	#
ဒီလင့် မှာတော့ သင်္ကြန်ကဲ နေတဲ့ ပုံတွေရယ် ကောင်မလေးတွေပါတယ် ရှာဖွေလေ တွေ့ ရှိလေ Heဲ Heဲ
June 17, 2009	ပေတူး	#
ဟုတ်လား.. လင့်မထည့်ပေးထားတော့ ဘယ်လိုကြည့်ရမှလဲကွာ… မင်းတို့က လည်း .. ပို့မယ့် ပို့တော့ ကတို့ ရောက်အောင်ပို့လေကွာ..
June 17, 2009	ooo	#
June 17, 2009	Netwok king	#
June 17, 2009	missy H	#
ဟုတ်ပါတယ်.. အရမ်းကို ဆိုးရွားနေတာပါ.. အဲဒါတွေ တင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို မပိတ်ထားပါဘူး.. ခု ဆို.. လူငယ်တွေ က အင်တာနက် ဆိုင်ရောက် ရင် အဲဒီ ဆိုဒ်တွေ အရင် ကြည့်တာပါ.. အရင်က မှ.. chatting အတွက်ဘဲ သုံးတာ ကနေ.. ခု အဲဒီလို ကိစ္စတွေအတွက်.. အင်တာနက် သုံးတော့.. ဘာမှ ကောင်းမလာနိုင်တော့ပါဘူး.
June 17, 2009	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,728,019 hits